भेडाहरुको जय होस् ! जय शम्भो !! - नेपालबहस
भेडाहरुको जय होस् ! जय शम्भो !!
भवानी प्रसाद कंडेल
| ६:४०:३७ मा प्रकाशित
सकेसम्म राजनीतिका बारेमा केही नलेख्ने अठोट गर्दागर्दै पनि आज मेरो कलमले मान्दै मानेन । सामाजिक सञ्जाल खोल्छु, कोही भन्छन् यति गतेको आन्दोलन, भोलि यहाँ जाने, पर्सी यहाँ जाने, म वाक्कदिक्क पर्दछु । म आफ्नो काममा व्यस्त, न कसैको बारेमा कुरा गर्नुछ न कसैबाट लिनुछ । न मलाई नमस्कार टक्राएर जागिर खानु छ, न कसैलाई जागिरको लागि सिफारिस गर्नुछ । मलाई विश्वास लाग्छ, आफ्नो क्षमताअनुसार जागिर अवश्य मिल्छ । म आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे, न मलाई कसैको चाकडी गर्नुछ ।
मेरो हजुरबुवा राणाशासन व्यवस्था फाल्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्नुभयो । हजुरबुवालाई लागेको थियो होला, मेरो छोराको जिन्दगी म भन्दा सुखी हुन्छ भनेर, तर के भ भयो त ? फेरि मेरो बुवा पंचायती व्यवस्थामा आन्दोलन गर्नुभयो । त्यतिखेर मेरो बुवालाई पनि लागेको थियो होला, अब मेरा छोराछोरीलाई सुखै सुख हुन्छ भनेर, तर के भयो त ? फेरि मैले ०६२÷६३ को आन्दोलन गरे, मलाई पनि लागेको थियो अब मेरै समयमा समृद्धि हुन्छ, तर के भयो ?
द्वन्द्व समापन भएको १५ बर्षको अन्तरालमा परिवर्तन के भयो ? र अब के गर्छौ भनेर सर्वसाधारण जनतालाई भ्रममा पार्ने । नेपालमा नेपालको मौलिकता बिनाको कुनै पनि सिद्धान्त लागु हुँदैन । नेपालको धर्म, संस्कृति र मौलिकता डलर र भारुमा साट्ने, भागबन्डा नमिल्दा आन्दोलन गर्ने, जनता भड्काउने ? तर्सथ भित्री कुरा बुझेर बहिस्कार गर्नु जरुरी छ ।
तेत्रा हजारौं मान्छेको बलिदानबाट प्राप्त भएको गणतन्त्रले हामीलाई के दियो ? दियो त केवल भ्रष्टाचार, परिवारवाद, अशान्ति, यहाँ भन्दा अरु के दियो ? छ तपाईंसँग उत्तर ? अवसर पाएका होलान् त तीन नेताका झोला बोक्ने झोलेले मात्र, अनि फेरि हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने ? धिक्कार छ, तिम्रो क्रान्तिकारी सोच देखेर ।
दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारी, ती निर्दोष १७ हजार नेपाली नागरिक र निर्मला पन्तको न्यायका लागि अनि आफ्नो देशको अस्मिता लुटिदाँ आन्दोलन गर्ने हिक्मत नभएका यिनै दलाल, बलात्कारी हरुको पछि लागेर समय किन खेर फाल्ने ? ए ! मेरा दाजुभाई, दिदीबहिनीहरु हो ।नेपालको राजनीति अझै बुझ्नु भएको छैन ,के राजनीति गर्छौ यार ! थुक्क तिम्रो जिन्दगी ! अझै पार्टीको झण्डा बोकेर पछिपछि दौडिन लाज लाग्दैन हैं ? जय होस् भेडाहरुको ! जय शम्भो !!
विश्वमा दुई सयभन्दा बढी देशहरु छन् । प्रत्येक देशमा शासनव्यवस्था फरक फरक छ । धेरै देशको इतिहास हाम्रो देश भन्दा कान्छो छ तर त्यहाँको विकास, समृद्धि हाम्रो भन्दा धेरै छ। कुनै देशमा प्रजातन्त्र होला, कुनैमा राजतन्त्र, कुनै देशमा गणतन्त्र होला तरपनि विकासले फड्को मारेको छ । अब तपाईं भन्नुस् ? तन्त्रमन्त्रले विकास गर्छ । विकासको लागि इच्छाशक्ति चाहिदो रहेछ । अब भन्नुस्, हामी केका लागि लड्ने, केका लागि आन्दोलन गर्दैछौं । छ तपाईंसँग उत्तर ?
राजा राम्रो छैन भन्यो, त्यो पनि फालियो । संविधान राम्रो छैन भन्यो, त्यो पनि फालियो । राणा राम्रो छैन भने, त्यो पनि फालियो । अब के राम्रो छैन ? केपी ओली राम्रो छैन ? प्रचण्ड राम्रो छैन ? शेरबहादुर देउवा राम्रो छैन ? माधव नेपाल राम्रो छैन ? साच्चिकै तपाईहरुले यिनै टाउकेको लागि आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ ? अब पनि हामीमा चेतना आएन भने कहिले आउने ? हामी अझै नेताहरुको पछि लागेर आन्दोलन गर्नुको औचित्य के ?
आन्दोलन त २००७ साल देखि चलिआएको छ । थुप्रै क्रान्ति अनि क्रान्तिकारी उदाए, तर जेमा क्रान्ति हुनुपर्ने थियो त्यसमा भएन । कृषि प्रधान देश, तर खोई कृषि क्रान्ति ? खोई औधोगिक क्रान्ति ? खोई शिक्षामा सुधार ? खोई रोजगार ? खोई नागरिकको सुरक्षाको ज्ञारेन्टी ? आफ्नो लागि सिटामोल किन्न विदेश पुग्ने नेताले खोई देशमा अस्पताल अनि दक्ष स्वास्थ्यकर्मीका लागि किन केही गरेनन ? अझ हामी भेडा जनता तिनै नेताको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने ?
के तपाईंहरुलाई यिनीहरूको इतिहास थाहा छैन ? आज देश जुन ठाउँमा छ, यिनैका कारणले छ । जाउ, भेडा जाउ । बलि तिमीहरु कै चढने हो । जाउ आमाको काखलाई रित्ताउन जाउ । उफ्री उफ्री जिन्दावाद र मुर्दावाद भन् जाउ । श्रीमतीको सिन्दुर पुछन् जाउ, छोराछोरीलाई टुहुरो बनाउन जाउ । साथीहरुलाई एक्लो बनाउन जाउ । मर्ने भनेको तिमी र हामी मात्रै हो । हामीले तिम्रा छोराछोरी र बुहारीलाई सत्तामा पु¥याउनको लागि आन्दोलन गर्दिन् पर्ने । यो आन्दोलन भनेको सत्ताका लागि मात्र हो । जब यिनीहरूले सत्ता प्राप्त गर्छन्, अनि, विकृति विसंगति फैलाउँछन् ।
साँच्चिकै हामी के परिवर्तन गर्न चाहन्छौं ? व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहन्छौं या व्यवहार परिवर्तन गर्न चाहन्छन् ? तपाईलाई लागेको होला, के सबै कुरा तन्त्रमा अडिएको छ ?
मैले विश्वका केही देश घुम्ने मौका पाए । चीनदेखि जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड, अनि आफैं कोरियामा बसेर पैसा पनि कमाए । त्यहाँका राजनेताहरु इतिहास बनाउनको लागि रातदिन देशलाई मुटुमा राखेर काम गर्छन् तर यहाँ ठिक विपरित । तपाईं ती देशहरूको इतिहास हेर्नुस त, तिनको समृद्धिको यात्रा हेर्नुस त ?
तपाईंले सोची राख्नुहोला, यो आन्दोलन नागरिक सर्वोच्चताका लागि, संविधान रक्षाको लागि ! अझै तपाई भ्रममा हुनुहुन्छ । किन भ्रममा हुनुहुन्छ भने यो आन्दोलन भनेको पदको लागि हो । हामीले भनेम् हाम्रो संविधान विश्वको नमूना संविधान, यो संविधान निर्माणको लागि हामीले खर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर, संविधानका लागि १७ हजार मान्छेले बलिदान दिए । यो संविधानको लागि धेरैले आफ्ना बुवाआमा गुमाउनुपर्यो, धेरै विधवा हुनुपर्यो, धेरै टुहुरा हुनुपर्यो । के यसपछि जनताले शान्ति पाएँ ? जनताले समृद्धि पाए ? पाए त केवल भ्रष्टहरु पाए । अब फेरी तिनै अनुहारको लागि आन्दोलन गर्दिन् पर्ने ।
व्यवस्था परिवर्तन गर्न रक्तपात गर्न आवश्यकता थियो ? क्रान्ति भनेको मारेर वा मरेर मात्रै गरिन्छ ? १७ हजार मरे ल ठीक छ, गणतन्त्र आयो, जनताले के पाए ? राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र थपियो, हाम्रो अवस्थामा के परिवर्तन भयो ? तन्त्र जे आवस, प्रधानमन्त्री जो बनुन, या राजाले नै देश चलाउन, हामीलाई केही फरक पर्नेवाला छैन ।
मैले विश्वका केही देश घुम्ने मौका पाए । चीनदेखि जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड, अनि आफैं कोरियामा बसेर पैसा पनि कमाए । त्यहाँका राजनेताहरु इतिहास बनाउनको लागि रातदिन देशलाई मुटुमा राखेर काम गर्छन् तर यहाँ ठिक विपरित । तपाईं ती देशहरूको इतिहास हेर्नुस त, तिनको समृद्धिको यात्रा हेर्नुस त ? विकास गर्नलाई इच्छाशक्ति चाहिन्छ नकी वादले काम गर्छ । जति राम्रो तन्त्र भएपनि नेतामा इच्छाशक्ति भएन भने कहिलेपनि समृद्धि हुँदैन ।
त्यसको उदाहरण हाम्रो नेपाल हो । हामीले यति धेरै तन्त्रहरु प्रयोगमा ल्याइयो तर देश जहाँको तँही । के पुष्पलालले सोचेको साम्यवाद गल्ती छ? बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद गल्ती छ ? राजाहरूको राजतन्त्र प्रणाली गल्ती छ ? गल्ती त सिद्धान्तमा टेकेर तहसनहस बनाउने नेताको, हामीमा भएको भेडा संस्कृति को हो । हामीले जहिले पनि राम्रोलाई होइन, हाम्रालाई खोजेको कारणले आज हाम्रो देशले यस्तो भोगिरहेको छ ।
एकचोटी सामान्य मानिसलाई सोध्नुहोस्, गणतन्त्रले के फरक पर्यो ? हामीलाई बाँच्न पाउनु पर्यो । विकासले फड्को मार्नु पर्यो । राजतन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्रले केही फरक पार्दैन । यी सबै तन्त्र मात्र हुन् । हामी तन्त्र भित्र भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहन्छौं । गणतन्त्र आएर किन खुशी हुने ? राजतन्त्र गएर किन खुशी हुने ? आखिर प्रवृतिमा परिवर्तन आउँदैन भने । तन्त्रका अगाडि जे झुण्डिए पनि केही हुनेवाला छैन् ।
नेतालाई सुधार्ने र बिगार्ने काम हामी जनताले हो । यदि हाम्रो भेडा संस्कृति परिवर्तन गरिएन भने आज मैले गाली गर्छु भोलि मेरा छोराछोरीले गाली गर्छन्, यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । त्यसैले हाम्रोलाई होइन, राम्रोलाई चिनौं । समयमा सोचौं, सबै नेतालाई बहिष्कार गरौं ।
मेरा भाइहरुले खुसी भएर लड्डु ख्वाइख्वाइ गरेछन् : ओली ९ घण्टा पहिले
डा. केसीको सत्याग्रह स्थगित १० घण्टा पहिले
बुढानिलकण्ठमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै १२ घण्टा पहिले
तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन वामदेवकाे माग १६ घण्टा पहिले
चीनमा नयाँ फैसला, पूर्व पत्नीलाई घरायासी काम गरेबापत क्षतिपूर्ति दिन आदेश १२ घण्टा पहिले
थप ९४ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि ९ घण्टा पहिले
बालविवाह न्यूनीकरणको अभ्यासमा स्थानीय सरकार ३ दिन पहिले
सङ्घर्ष गरेर पढिरहेका छोरीहरू १६ घण्टा पहिले
संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा म्यान्मार जुन्ता शासकको निन्दा ४ दिन पहिले
दिल्लीबाट जापानिज नागरिकलाई लुट्ने गिरोहका योजनाकार पक्राउ ६ दिन पहिले
‘कोभिशिल्ड’ खोप खरीदका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी ६ दिन पहिले
प्रचण्ड–माधव समूहले आह्वान गरेको आम हड्तालप्रति ध्यानाकर्षण ३ हप्ता पहिले
अष्ट्रेलियाका सबै नागरिकलाई अक्टोबरसम्म खोप ३ हप्ता पहिले
लघुवित्तले पायो ४ करोड रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति ४ हप्ता पहिले
कर्णालीका सात जिल्लामा संक्रमितको संख्या शून्य २ हप्ता पहिले
जनमानसमा भविष्यप्रति आशाको भाव सिर्जना गरेका छौ : मुख्यमन्त्री राई १ हप्ता पहिले
अब बैंकले ३० करोडभन्दा कम कर्जा लगानी गर्न नपाउने २ हप्ता पहिले
नयाँ जनादेश अपरिहार्य भएको ऊर्जामन्त्रीको तर्क ३ हप्ता पहिले
सिन्धुपाल्चोकको नाका तातोपानीमा बिओपी स्थापना ४ महिना पहिले
२० मीनेटमै सकियो नेकपाको सचिवालय बैठक ३ महिना पहिले
पहिरोले बस भिरबाट खस्दा एकको मृत्यु, ६ जना घाइते ५ महिना पहिले
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिर्गौला दिन नातिनी तयार १२ महिना पहिले